Dhaqtar Liibiyaan ah oo muddo dheer ka shaqeynayay Ingiriiska oo u dhintay COVID-19 ayaa meydkiisa si weyn loo sagootiyay
Mogadishu - 01:43:57
Thursday April 23, 2020 - 22:15:39 in Wararka by Super Admin
Dhaqtar u dhashay waddanka Liibiya oo muddo 17 sano ah u shaqeynayay hay’adda caafimaadka qaranka Ingiriiska ee NHS oo u geeriyooday xanuunka Coronavirus oo uu ka qaaday qof bukaan ahaa oo uu daaweynayay ayaa si weyn meydkiisa loo sagootiyay.
Dr Sadeq Elhowsh oo ku takhasusay qalliinka lafaha iyo kala goysyada ayaa caan ka ahaa Ingiriiska, aadna loogu qadarin jiray xirfaddiisa shaqo, waxaana geeridiisa ka hadlay Wasiirka arrimaha dibadda Ingiriiska Dominic Raab iyo Wasiirka caafimaadka Matt Hancock.
Waxa uu dhaqtar Sadeq ku dhashay Tripoli 1961-kii, waxa uu ka baxay qaybta caafimaadka ee jaamacadda Tripoli 1987-kii isagoo guursaday gabar Liibiyaan ah oo u dhashay 4 carruur ah, sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyay Isbitaalka weyn ee Tripoli tan iyo 1992-kii.
Wixii ka dambeeyay 1992-kii waxa uu u wareegay Ingiriiska oo uu ka qaatay shahaadada qalliinka lafaha iyo kala goysyada isagoo ka shaqeynayay UK illaa uu ka geeriyooday.
Muuqaalkan hoose waxaa ka muuqda dhaqaatiirta iyo kalkaaliyeyaasha caafimaad ee NHS oo si diirran ugu sacab tumaya baabuurkii siday meydka marxuumka oo markii dambe lagu aasay isla Ingiriiska.
Waa dhaqtarkii labaad ee Liibiyaan ah oo Coronavirus ugu geeriyooday Ingiriiska, isayadoo dhowaan uu geeriyooday dhaqtar Younis Ramadan oo ka mid ahaa baarayaasha caafimaad ee ugu weynaa belediyadda Harringay ee waqooyiga London, waxaana isna uu ku geeriyooday isbitaal ku yaalla London.